Guddi loo saaray barakacayaashii dhawaan laga saaray xeryihiin ay ku noolaayeen – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Guddi loo saaray barakacayaashii dhawaan laga saaray xeryihiin ay ku noolaayeen
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow ayaa guddi baaritaan u saaray kiiska dad barakacayaal ah oo dhammaadkii sanadkii tagey xoog looga saaray dhul ay deganaayeen.
“Ma qaadan karno in dhagaha aan ka fureysanno tabashooyinka ay qabaan dadka barakacyaasha ah. Maamul ahaan waxaa naga go’an in aan dhidibada u taagno hannaan ku saleysan ilaalinta sharciga iyo xuquuqda muwaadinka.
Si taas loo gaarana waa in aan tixgelinnaa dhammaan tabashooyinka ay qabaan bulshada ku dhaqan Gobolka.” ayuu yiri guddoomiye Yarisoow.
Guddiga loo xil-saaray arrinkan ayaa ka kooban shan xubnood waxaana hoggaamineysa Guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka Marwo Basma Caamir Axmed, iyadoona xubnaha kale ay kala yihiin, Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi, Zakiya Axmed Xuseen, Mahad Xuseen Axmed iyo Drs Hodan C/llaahi Cali oo ka kala tirsan hay’adaha xuquuqul Insaanka, Maamulka Gobolka iyo bulshada rayidka ah.
← Saameyn intee la eg ayuu ku yeeshay dadkii ku tiirsanaa Wabiga Shabeelle oo guray
Maxkamada ciidamada oo bilaawaday dhageysiga dacwada dilkii Saciid Mariino →